အပျိုကြီးများ အတွက်သင်ခန်းစာ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Entertainment » အပျိုကြီးများ အတွက်သင်ခန်းစာ	15
Posted by Ko out of... on Mar 17, 2012 in Entertainment | 15 comments
ဗေဒင်ဆရာ တစ်ဦးထံသို့ အသက် ၃၅နှစ် အပျိုကြီးတစ်ဦးရောက်လာ၏. . .
အပျိုကြီး ။ ဖူးစာဖက် ရှိနိုင်ပါ့မလား ဆရာ
ဗေဒင်ဆရာ ။ ရှိတာပေါ့
အပျိုကြီး ။ ရှင် . . .
inz@ghi says: Well done astrologer… !
Direct marketing through time management to lower the risk…
Im gonna use this technique in next 10 years…
Gipsy says: တော်လိုက်တဲ့ ဗေဒင်ဆရာ …၊
နည်းပေးလမ်းပြ ဆရာ …၊
နာလဲ တနေရာရာ သွားပြီး ဗေဒင်ဆြာ လုပ် ဦး မှာ …။
tree says: မိုက်တယ်ကွာ idea
water-melon says: ဗေဒင်ဆရာကြီးနဲ့ အပျိုကြီးယူလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး
chel gyi says: မယူဖူးဆိုရင် ဘာလုပ်ကြမှာတုန်း….
aunty tun says: မယူရင် ဗေဒင်ဆရာမှားတာပေါ့ ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 217
Burmese or Chinese says: တော်လိုက်တဲ့ ဗေဒင်ဆရာ
မမ အပျိုကြီး ယူလိုက်တော့……..
mg mg says: “အပျိုကြီး ။ ၀မ်းသာလိုက်တာဆရာရယ်” သေချာသလောက်ပဲ
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အဲလိုနဲ့ …
ဗေဒင်ဆရာနဲ့ အပျိုးကြီး မမ ဟာ …
မြှားနတ်မောင် လက်နက်နဲ့ ..
နဖူးစာ ရွာလည် ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာ …..
ဟုတ်လားတော့ သိဘူး … :D
အဲ … မေ့လို့ …
အဲဒီ ဗေဒင်ဆရာရဲ့ နာမည်ဟာ ဗြဲသီး ဖြစ်ကြောင်းပါလို့ ……..
etone says: ဗေဒင်လာတွက်တဲ့ အပျိုကြီးတိုင်းကို ဒီလိုစာရွက်မျိုးပေးလို့ကတော့ …အပျိုကြီးတွေဝိုင်းလုတာနဲ့ … ဗေဒင်ဆရာ မိန်းမမရပဲ အရိုးတခြား အသား တခြားဖြစ်သွားမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2033
ကိုရင်မောင် says: ရွာထဲမှဂေါ်မစွန်လူပျိုကြီးများအား
snow white says: ရွာထဲမှာအပျိုကြီးတွေရှိနေတယ် အဲဗေဒင်ဆရာဆီကိုလွှတ်ရမယ်
windtalker says: ဒါဟာ ရွာထဲက အပျိုဂျီးများအတွက် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပေါ့နော် ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 948
koaung says: မိုက်တယ်ဗျိုး တိုတိုလေးနဲ့ရီရတယ်
Happykoko1234 says: ဟဟဟဟဟဟ
Comments By Post``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - ရာမည - Foreign Residentစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - KZ - naywoon niလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - KZ - မောင် ပေဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - မင်းမင်း - ကြက်အူလှည့်စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - KZ - ရာမညနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၅) - မင်းမင်း - KZဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - မင်းမင်း - uncle gyiအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - KZ - lele kyiမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - padonmar - အလင်း ဆက်ရွာသူ/သားများ အတွက် - KZ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးအတု - KZ - uncle gyiSakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - ကြက်အူလှည့် - uncle gyi“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ko pauk mandalay“သဘာဝအလွမ်းမင်းသားကြီး (ဦးကြင်ဥ)” ရှေးကဗျာများပြန်လည်ကူးယူဖ်ာထုတ်ခြင်း အမှတ် (၈) - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ko pauk mandalay``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - cobra - ခင် ခသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - အလင်း ဆက် - TNAရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - garuda - weiweiဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - Mr. MarGa -etoneမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ -etone - may julyEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities